Sidee loo soo celin gurmad iyo aad SMS BlackBerry
Backing ilaa SMS waxaa muhiim u ah dadka isticmaala qaar ka mid ah sida ay u sii SMS ah ujeedooyin mustaqbalka ama tixraac. Dadka isticmaala Blackberry, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan si ay dib aad SMS BlackBerry. Mid ka mid ah hababka ay tahay iyada oo la isticmaalayo caanka ah software desktop Blackberry, hab kale waa adigoo isticmaalaya BlackBerry SMS Back Up app for Blackberry.
Kaabta iyo soo celinta SMS BlackBerry la BlackBerry Desktop Software
Talaabada 1: Download oo ka rakibi BlackBerry Desktop Software http://global.BlackBerry.com/en/software/desktop.html .
Talaabada 2: baxsad software BlackBerry Desktop iyo xirmaan telefoonka aad BlackBerry.
Talaabada 3: Riix Back ilaa hadda in ay dib u kor xogta aad. Sanduuqa pop up A muuqan doonaa fursadaha gurmad ah.
Talaabada 4: "(data soo xulay oo keliya) Custom" Riix dooro xogta ku SMS ka dibna riix badhanka Back up u soo kor.
Talaabooyinka soo celinta SMS kaabta
Talaabada 1: Isku qalab BlackBerry aad si aad u computer iyo adigoo gujinaya fallaadha hoose ee soo socota si ay u Device ee dhinaca bidix ee sare ee software-ka dooro Soo Celinta.
Talaabada 2: Dooro gurmad aad rabto in la soo celiyo ka dooro "doortaan xogta qalab iyo goobo" iyo hoos si ay u doortaan SMS.
Talaabada 3: Riix soo celiyo. Digniin arbushin doonaa, kaliya guji haa iyo sugto SMS ah in dib loo soo celiyo.
Si aad u Soo Celinta ee kaabta BlackBerry qalabka kale.
Mobiletrans Wondershare waa codsi ah in ay taageertaa 1-Guji kala iibsiga ka mid phone / files gurmad telefoon. Waxa ay taageertaa in ay akhriyaan faylasha gurmad Blackberry iyo sidoo kale qalabka sida iPhone, qalabka Android, iyo telefoonada Nokia Symbian. Waxa kale oo ay taageertaa kala iibsiga u dhexeeya oo dhan dhufto ee la heli karo. Faa'iido:
Iibsiga files gurmad blackberry, Lugood / iCloud files gurmad, iwm qalabka kale
Bedelka xogta laga dhufto ee kala duwan. Bedelka ka iPhone in Android iyo qeybsanaan ku xigeenka
Kala iibsiga Fast u dhexeeya qalabka
Your xogta waa 100% oo nabad iyo xasilooni leh MobileTrans
Taageerada gurmad iyo soo celinta dhexeeya dhufto ee kala duwan
Sida loo isticmaalo Wondershare MobileTrans
Talaabada 1: Riix badhanka Download hoose si aad u dejisan iyo rakibi Mobiletrans Wondershare on your computer.
Tallaabo 2: Ku bilow software MobileTrans ka dooro Soo Celinta ka hayaan hab.
Talaabada 3: Waxaad calaameysaa waxyaabaha aad rabto in aad wareejiso oo ka dhacay button bilowga nuqul si ay u gudbiyaan dhexeeya telefoonada ah. Telefoonka ee xaq yahay telefoonka helo xogta.
MobileTrans Saamaxaya kuwa isticmaala si loo soo celiyo xiriirada iyo SMS ka gurmad BlackBerry in qalabka kale ee ka soo tebiyaan marxalado kala duwan. Users haysta telefoon cusub oo aad rabto in lagu wareejiyo ay SMS iyo xiriirada in ay phone cusub ka blackberry isticmaali kartaa app Wondershare MobileTrans si ay u gudbiyaan ay SMS iyo xiriirada la hal-riix aan kaga dayanayaan xiriirada ama SMS mid kale ka dib markii ay.
Kaabta iyo soo celinta SMS BlackBerry la app ee kaabta SMS
1. kaabta la app ee kaabta SMS
Talaabada 1: Download iyo rakibi BlackBerry SMS app ee kaabta in aad Device BlackBerry ka BlackBerry Store ama kaliya booqo https://appworld.BlackBerry.com/webstore/content/98984/?countrycode=US&countrycode=MU&lang=en si aad u hesho.
Talaabada 2: Tubada Bartan bidix ee sare ee shaashadda BlackBerry ay u arkaan fursadaha.
Talaabada 3: Tubada ee kaabta in gurmad aad SMS.
Talaabada 4: Dooro ikhtiyaarka SMS iyo xaqiijiyo file kaabta XML ah. Hadda riix Abuur kaabta hoose ee shaashadda.
2. Soo Celinta la SMS app ee kaabta
Talaabada 1: Tubada Bartan bidix ee sare ee shaashadda BlackBerry ay u arkaan fursadaha.
Talaabada 2: Tubada on Soo Celinta doorasho in la soo celiyo aad SMS.
Talaabada 3: Dooro soo celin SMS / MMS oo riix qaybta Soo Celinta kaabta hoose ee shaashadda si ay u bilowdo hawsha.
Sababaha More in ay isticmaalaan Mobiletrans Wondershare
, Habka ugu fudud oo ugu ammaanka badan ugu dhaqsaha badan si ay u gudbiyaan SMS iyo xiriirada in qalab BlackBerry waa iyada oo MobileTrans app. App akhriya gurmad faylka BlackBerry ka Desktop BlackBerry ee Software iyo wax kala wareejinta, waxa uu qalab cusub.
Si ka duwan qalabka lacag la'aan ah halkaas, MobileTrans ku siinayaa awood aan xad lahayn si ay garab xayiraad lagu soo rogay qalab aad ka dhiga kala iibsiga xogta, gurmad, soo celiyo iyo waxyaabo badan oo kale oo ka fudud oo dhaqso.
Soo Celinta xogta iPhone aad ku saabsan qalabka Android ama macluumaadka telefoonka aad Android aad iPhone.
Click A sameeya oo Sixira. Ma aha in aad in ay dhex maraan iyo saaxiriinta, ama habka loo baahnayn marka wareejinta xogta. Just riix "Start Copy" button iyo wax kasta ayaa la sameyn doonaa adiga.
MobileTrans Hayaa xogta aad dhawrsan ka dib markii suuqa kala iibsiga oo aan laga badinin ama faylasha wax fasaadiya.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo kaabta iyo Soo Celinta Your BlackBerry SMS